Kwa Maritane Bush Lodge - Indawo yokuhlala
Indawo yokuhlala Kwa Maritane Bush Lodge
Izivakashi KwaMaritane Bush Lodge zingase zihlale emakamelweni okunethezeka futhi zifakwe emanzini, noma zitholele ezakhiweni ezinezinhlanzi kanye ne-cabanas.
Njengoba ikhona emgodini ongaphandle we-volcano engasebenzi, i-KwaMaritane Lodge ihlala izivakashi endaweni yokunethezeka ngaphakathi kwesihlahla esinamagagasi asePilanesberg National Park futhi eduze ne-Sun City emangalisayo.
Vumela isifiso sakho sonke sishayeke - sizitholele ngokuhlala kunoma iyiphi yezindawo zokunethezeka ezingu-90, kufaka phakathi igumbi elifinyelelekayo elingu-1. I-Maritane Bush Lodge nayo inezinhlaka ezingu-54 zezinkampani.
Wonke amakamelo ane-air conditioning ngayinye, izindlu zokugeza zokugeza kanye nezindlu zangasese, i-DSTV, ifoni yokudayela ngokuqondile, ama-plugs we-shaving kagesi, imishini yokwenza ikhofi / itiye kanye nesomiso sesezinwele. Isevisi yamakamelo kusuka 07h00 kuya ku-22h00.
9 imbiza Bush putt putt
Izinsizakalo zezokwelapha ocingweni
Amachibi amabili okubhukuda
Indawo yokudlela yaseCocktail engaphezu kwepaki
Isikhungo sezemfundo sase-Wildlife